Shan Qof oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed oo Ka Dhacay Dalka Faransiiska | Somalia News
Beesha Hawiye Oo War kulul kasoo Saartay Xariga Lagu la Kacay Taliyihii Danab.(Sawiro)
October 21, 2020 | Published by: yaska Waxaa maanta Muqdisho ka dhacay kulan ay kasoo qeyb galeen Waxgaradka ,Dhalinyarada, Aqoonyahanada iyo haweenka Beesha Hawiye, kulankan ayaana looga hadlayay xadhiga sharci darada ah ee loo geestay Taliyihii hore ee ciidamada Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalik. Waxgaradkii iyo dhamaan dadkii kala duwanaa ee kulanka ka hadlay ayaa si kulul u cambaareeyay xariga sharci darada ah ee loo geestay taliyihii hore ee ciidamada Danab Ismaaciil Cabdimaalik oo mudo bil kabadan ku xiran Wasaarada Gaashaandhiga. Waxa ayna ugu baaqeen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in si shuruud la’aan ah usoo daayo taliyaha ay sheegeen in loo xiray in uu ku heyb yahay Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya loona raadinayo dambi been abuur ah. Gabo gabada kulanka ayaana laga soo saaray War Saxaafadeedkan. WAR-SAXAAFADEED: Annaga oo ah Odoyaasha dhaqanka, Siyaasiyiinta, dhallinyarada Beelaha Hawiye, waxaan halkaan kusoo gudbineynaa gabood fallo iyo Xad-gudubyo badan oo ay Madaxda Qaranku kula kaceen Beesha iyagoo si qaldan u adeegsanaya Awooda Dowladnimo. Waxaana ka mid ah dhacdadii ugu danbeesay ee Madaxda Sare ku amartay xadhiga Taliye Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, oo ku Magacaabnaa Taliyaha Guutada 16’aad ee DANAB, kaasoo ah sarkaal ku sifoobay daacadnimo, wadan jaceel, hawkarnimo, iyo u dhabar adeeg shaqada Qaranka ee loo igmaday, Hawlihii u qabtay Ismaaciil waxaa ka mid ahaa: In uu hoggaaminayay Dagaalkii looga xoreeyay Cadowga Alshabaab Degmada JANAALE, oo ahayd goobta ay ka soo abuubuli jireen qaraxyada lagu dhibaateyo Dadka degan Magaalada Mogadishu. 2-Waxa uu Tayeeyay Aqoonta hawl-galineed ee Askarta iyo Saraakiisha Ciidanka DANAB, ayadoo ay yaraatay khasaaraha nafeed ee soo gaadhay Guutada. 3-Waxa uu ballaariyay deegaanada ay ka hawlgasho Guutada, asaga oo gaarsiiyay dhammaan xarumaha Dowlad-goboleedyada. 4-Waxaa uu kordhiyay hawlgallada lagu burburinayo, laguna cidhibtirayo jiritaanka Cadowga Alshabaab. Waxyaabaha sharciga Khilaafsan ee lagula kacay G/le Ismaaciil: Sarkaalka asaga oo gudanayo waajibaadkiisa shaqo ee uu qaranka u hayay ayaa Madaxda Sare ku sameeyay shaqo joojin iyo resto baalmarsan xeerarka u degsan Ciidanka Xoogga Dalka. 2-Waxaa loo Adeegsaday Awood dowladnimo si aan waafaqsaneen Sharciga. 3-Waxa uu dhaafay muddii 42 cisho ahayd ee uu Sharcigu u ogolaanayay Taliyaha Xoogga in Sarkaal u Xidhanaan karo. 4-Waxaa isku mar lagu wada sameeyay Shaqo Joojin, Xarig iyo Xil ka qaadis hal mar ah, taasoo aan waafaqsaneen Xeerarka ciidanka u yaala. 5-Waxaa Amar Madaxda Sare ka yimid uu Taliyaha Ciidanka Xoogga ku soo saaray warqad looga codsanayo Maxkamadda in G/le Ismaciil loo taxaabo Xabsiga dhexe, si loogu qaarijiyo halkaasi. 6-Waxaa uu Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ku hayaa Ismaaciil cadaadis iyo dulmi joogto ah oo ku saleysan Arrimo Shakhsi ah. Sababaha uu ku xidhan yahay Ismaaciil Abdimalik Waxaa uu u xiranyahay Taliye Ismaaaciil Abdimalik Arrimaha soo socdo: Waxaa Taliyaha Ciidanka iyo Madaxda Sare ee Dowladda u arkeen Ismaaciil in uu saaxiib iyo qaraabo dhaw la yahay Ra’iisul Wasaarahii hore Hassan Ali Khayre. 3-In Saraakiil badan hab beel ahaan ah xilalkooda looga qaaday, laguna bedelay kuwo ku heyb ah Madaxweyne Farmaajo. 4-Taliyaha Ciidanka waxa uu u bartilmaameysanayo G/le Ismaciil ayaa ah Arrimo shaqsi ah oo ka dhaxeeyo awgeed. 5-Waxaa la doonayaa in Sarkaalka loo sameeyo danbi been-abuur ah iyo Arrimo aan jirin, lana horgeeyo Maxkamada CQS, si loo qanciyo Mareykanka oo jawaab u raadinaya sababaha loo xidhay Sarkaalka, xil ka qaadisna loogu sameeyay. Beesha, ayada oo ilaalineysa, Midnimada iyo Jiritaanka Dowladnimo, ayay la fadhiisatay Madaxweyne Farmaajo laba (2) jeer, Si Arrimahaan jira loogu helo xal waara, loona joojiyo Dulmiga iyo ku tagrifalka Awoodeed ee lagu hayo Beesha, kulmadaas iyo ballanqaadyadii uu Madaxwayne Farmaajo sameeyay ayaan kasoo bixin wax miro dhal ah. Haddaba, Waxa ay beesha si cod dheer ugu sheegaysaa Madaxweynaha in si degdeg ah G/le Ismaaciil xoriyadiisa dib ugu helo. Waxa ay beesha ka digeysaa Arrimaha ay ku howlan yihiin Madaxda Sare ee Dowladda oo kale ah: Sumcad dilis iyo ku-xad gudub kasta ee khilaafsan sharciga ee lid ku ah sharafta Ismaaciil. 2-Abuurista dambiyo aan jirin ee lagu horgeenayo G/le Ismaaciil Abdimalik Maxkamadda. 3-In Madaxda sare ee dowladda ay joojiso Musuqa iyo Eexda Beeleysan ee ka dhexwadaan Ciidamada Qaranka Gunaanad Ayada oo Baaqani si toos ah ugu socdo Madaxwayanaha JFS ayaa, haddii aan jawaab deg deg ah uga helin Arrimaha aan kor kusoo tilmaanay, wax Allaale iyo wixii dhibaato iyo Mas’uuliyad darro ah ee ka yimaado waxaa qaadi doona Madaxwayne Farmaajo. LA WADAAG ASXAABTAADA
IOM oo sheegtay in dumarka ku nool xeryaha barakacayaasha Baydhabo ay sameeyeen agabka af xirashada ah “SAWIRRO”
Share on Facebook Tweet on Twitter Hay’adda IOM ee Qaramada Midoobay waxay ay sheegtay in dumarka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Beydhabo xeryaha ku yaala ay soo saareen agab badan oo ah maaski ama af xir si looga gaashaanto karoonaha IOM waxay tilmaamtay in dumarkan oo hay’addu ka taageertay dhanka tababarka iyo dharka laga sameeyo maaska ay ku guuleysteen in ay soo saaraan in ka badan 5,000 oo af xir . Agabkan ayaa qaar ka mid ah loogu deeqay dadka u baahan, halka kuwo kalana suuqa iib ahaan loo geeyay. Talaabadan ayaa ah mid lagu dhiiri gelinayo farsamada gacanta ee dumarka si ay noloshooda u maareeyaan. W/D: Maxamed Maxamuud Dhoore (Xarunta London) SHARE Facebook Twitter Previous articleWasiirka Arrimaha Gudaha ee Galmudug oo ka warbixiyay qorshaha golaha Deegaanka ee laga hirgelinayo Galmudug
Shan Qof oo Ku Dhintay Shil Diyaaradeed oo Ka Dhacay Dalka Faransiiska
October 11, 2020 | Published by: yaska
Labo diyaaradood oo aan aad usii waaweyneyn ayaa isku dhacay iyagoo hawada ku jira kaddibna waxay ku burbureen badhtamaha dalka Faransiiska, halkaasoo ay ku dhinteen shan ruux, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah.
Labada diyaaradood midda yar, oo siday labo ruux, ayaa ku dhacday xeyndaabka guri ku yaalla magaalada Loches, oo 46km u jirta magaalada Tours.
Diyaaradda weyn, oo nooceedu yahay Diamond DA40, ayaa iyana ku dhacday meel goobtaas u jirta 100m (328ft). Waxaa saarnaa saddex dalxiise.
Meelaha ay diyaaradaha ku burbureen ayaa laga xannibay shacabka, waxaana dadka deegaanka loo sheegay inaysan ka soo bixin guryahooda, sida uu qof goob jooge ah ku warramay.
Goob jooge lagu magacaabo Genevieve Allouard-Liebert, oo ku nool deegaankaas, ayaa sheegtay inay si toos ah u maqleysay “shanqarta weyn” ee diyaaradaha markii ay dhulka ku soo dhaceen.
Previous articleDaawo: Madaxwayne Biixi oo Kormeeray Xafiiyada Dawladda ee Magaalada Boorama
Next articleTaajir Muddo Kooban Ku Khasaaray Laba Bilyan oo Doollar
Xog: Xisbiga talada haya ee Somaliland oo xubno ku yeeshay xukuumada Somalia
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha wasiiradda cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid noqday xubno ka tirsanaa xisbiga Kulmiye ee haya talada maamulka Somaliland. Prof. Maxamed Cismaan Dubbe, oo ka mid ahaa xubnihii udub dhexaadka u ahaa ee diyaariyey barnaamij siyaasadeed ee xisbiga Kulmiye ku galay doorashada madaxtinimada uu ku guuleystay Muuse Biixi biixi 2017, ayaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta Soomaaliya halka Cabddale Xaaji Cali oo isna xisbigaasi ka tirsanaa loo magacaabay wasaarada qorshaynta. Arrintaani ayaa aad looga hadal hayaa magaalada Hargeysa maadaama xisbiga Kulmiye uu dhigiisa Waddani horay ugu eedayn jiray xiriir uu Somaalia la leeyahay xubno ka mid ahna ay ku biireen dowladda Somalia ayaa hadda eedeyntaasi waji kale yeelatay. Xubnaha cusub ee golaha wasiiradda ugu mid noqday gobollada Waqooyi ayaa meesha ka saartay xubnihii dowladdihii kala duwanaa xilal wasiiro kasoo qaban jiray sida wasiir Maareeye oo seddaxdii dowladood ahaa mas’uul aan dhicin. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
October 21, 2020 0 Less than a minute Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-gareen ayaa u Magacaabay Aadan Xared Cumar taliyaha howlgelinta ciidanka Daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. Goobjoog News